Haayada ICRC oo sheegtay in mid kamid ah shaqaalaheeda lagu dilay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaHaayada ICRC oo sheegtay in mid kamid ah shaqaalaheeda lagu dilay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho
March 29, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Marxuum Cabdulxaafid Yuusuf Ibraahim. [Xigashada Sawirka: ICRC]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Haayada Laanqeyrta Cas (ICRC) ayaa sheegtay in mid kamid ah shaqaalaheeda lagu dilay Soomaaliya.
Cabdulxaafid Yuusuf Ibraahim, kaasoo si xun ugu dhaawacmay qarax loogu rakibay gaarigiisa galabtii Arbacada gudaha Muqdisho, ayaa geeriyooday, sida ay sheegtay ICRC.
“Aad ayay noo dhaawacday dhimashada Cabdulxaafid, kaasoo xubin muhiim ah ka ahaa shaqaalahayaga Soomaaliya,” Simon Brooks, madaxa ICRC ee Soomaaliya ayaa sidaa ku sheegay bayaan tacsi ah.
Cabdulxaafid ayaa ICRC ku biiray shan bilood kahor isaga oo ahaa xafiishayaha isgaarsiinta iyo xiriirka, sida ay sheegtay haayada biniaadanimada ee ICRC.
Saraakiil katirsan booliiska Soomaaliya ayaa Arbacadii warbaahinta u sheegay in gaariga Cabdulxaafid uu ku qarxay meel wax yar u jirta xafiiska ICRC ee Muqdisho.
ICRC ayaa sheegtay in mid kale oo shaqaalaheeda katirsan uu dhaawac fudud kasoo gaaray qaraxa.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyada weerarkaas, balse xagjiriinta Al-Shabaab ayaa mar walba geysta weerarada noocaan oo kale ah.
March 28, 2018 Ugu yaraan afar qof oo ku dhaawacmay kadib markii bumbo lagu xiray gaari boolis uu ku qarxay meel u dhow xafiiska ICRC ee Muqdisho
Puntland’s President sends his condolences on the killing of military prosecutor
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland’s President Abdiweli Mohamed Ali sent his condolences to the Puntland people, friends and family of prosecutor of Puntland’s military court Abdikarim Hassan Firdiye, who was killed in Bosaso on Sunday. The President [...]